Nethempeli Perun: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
The main unkulunkulu lwamaSlav, Yiqiniso, Perun. Wafunga ngegama lakhe, okwathi ngemva Russia, is ebiyelwe isivumelwano seminyaka 911 nge amaGreki ayephelezelwa ePrince Igor. Unkulunkulu ukuduma nokunyazima kombani , njalo kwakudingeka ehlome ngembazo kanti idandili lemitshoko.
Kukholakala ukuthi fireballs, Perun ngubani kubeka phansi - intukuthelo unkulunkulu, futhi uma izakhiwo lokhuni yalo ivuthe umlilo ngesikhathi kunesiphepho umbani, abakwazanga ucime.
Amafu amafu abantu ngokuthi Perunova izihlahla, lapho uhlale umbani-inyoni. Uma ngumphefumulo ophilayo yaphazanyiswa kubo, kwakusho into eyodwa kuphela: ngaphakathi okubi, okuyinto uhlushwa unkulunkulu. At the site umbani isiteleka wahlala isihlabathi oncibilikisiwe (lokuduma), okuthiwa itshe Perunova.
Efuna ukuwina izimpi, abantu basendulo Wahlaba, amasayithi engcwele kuvezwa unkulunkulu ononya. Azi Imivubukulo izenze - yensimbi hatchets ngemihlobiso umbani kanye nelanga. Kukholakala ukuthi izifundo ezinjalo zinamandla amakhulu ukuvikela zabanikazi. unkulunkulu Inamandla babemesaba futhi ucele isivikelo sakhe.
Indawo yokukhulekela onkulunkulu bamanga ebizwa ngokuthi Slavic ethempelini abezizwe. Omunye izakhiwo eyinhloko izwe lobuqaba eyayifihliwe ukuhlakanipha okukhulu amadlozi, engcwele Kwakhiwani round ukuma phansi kwezulu evulekile. Temple, emnyango lapho uboshelwe ehlotshisiwe, elamiswa entabeni, ufaka palisades futhi umsele.
Ukuma ethempelini Perun Kwakungathi octagon. Nine amathempeli sephulwe isikhala elingaphakathi isikhala ngokwesiko. Eight wabo zitholakala emhlabeni ozinikele main noNkulunkulu wokuduma. Izazi-mlando zisikisela ukuthi amathempelana altare esisogwini Alatyr-itshe phezu Red Square e Moscow. Lokhu imbokodo enamandla wakhonza njengephayona ngesisekelo zintathu Church, futhi kamuva ukubukeka engcwele ladliwa ngesisekelo Vasiliya Blazhennogo Cathedral ne domes ayisishiyagalolunye.
Omlilo behlonipha Perun
Ethempelini Perun eceliwe ukuvikelwa uNkulunkulu, kukholakala ukuthi eduze scrutinizes umuntu phambi into ukumnika wona. Lapha kukhona ukukhula okungokomoya kwabantu, bamukisa ngesifungo baba inviolable. Ngo ahloniphe unkulunkulu abakhulekelwa wonke amasosha elikhanyayo imililo okuphakade, nge-oki izingodo (lena isihlahla esinamandla, ngokusho legend, lihlotshaniswa Perun, futhi lezi lezixuku eRussia zigadiwe).
Ingabe yakho ilangabi okuphakade nobuqaba?
Bambalwa abantu abacabanga, kodwa ilangabi okuphakade - ukuvuselelwa yokukhulekelwa kukankulunkulukazi nokuduma, futhi ithempeli ezakha Perun sise ezibiyele udonga eMoscow. Kube iyilandele yonke imithetho ukuthi baye balandela okhokho bethu: emlilweni ongacimekiyo, kwabaqaphi ahlomile, ekuphakameni phansi, i-altare elenziwe egwadle, yokukhulekela rites amasosha bawa futhi ebeka kwesihlahla se-okhi amagoda ezimbali.
By the way, iSonto Lobu-Orthodox ukholelwa yilangabi okuphakade akuhlangene ukuhlonipha inkumbulo liyakhubeka yiMpi Enkulu Yobuzwe.
indawo Siko ekhatsi Kiev
Abavubukuli ezazini eziye zahlola ngokuhlanganyela ethempelini Perun ekhatsi Kiev iminyaka 980 ubudala, wathola isibalo esikhulu sezithunjwa amathambo lezinkunzi amaqhude, abawahlabela Nkulunkulu. Akumangazi ukuthi lapha ngembazo yensimbi watholakala - iwuphawu ongumvikeli amasosha. Kuyathakazelisa ukuthi ngesikhathi sokubhapathizwa izithombe ukukhanya Orthodox abangcwele izithombe onkulunkulu bamaqaba zihanjiswe, futhi Perun Yaphinde yaqanjwa ngokuthi i-Ilya-Prophet (Gromovnika).
Perun shrine e orel
Qakala ifa lethu savuka engcwele, esiza ukwakha umqondo izakhiwo yobuqaba. Endaweni eyayithengwe umuntu yangasese, abaqeqeshiwe kusenza sikwazi ukudlulisela emkhathini we lasendulo ethempelini lwamaSlav eliqoshiwe ka Perun (Eagle).
Ukuthi kuyini, vele sesiyazi: Ngokusho yetinsita kule ndawo engcwele uya izakhamuzi, ngubani bakhazimulisa uNkulunkulu, futhi akhanyiswe omlilo.
Eceleni engcwele ebonakala inkwali eduze, lapho sandstone misela. Ezivakashela umuzana, kubonakala sengathi once upon a time itshe selincibilikile kusukela ulaka lukaNkulunkulu wema ngendlela eyinqaba kakhulu, lapho manje ithempeli Perun e orel.
Izithombe izakhiwo abuyiselwe linikeza umoya kuNkulunkulu onamandla, behlonipha kabani mkhosi aphethwe izikhathi eziningana ngonyaka. Lezi akhethiwe nomndeni wonke uphumule emoyeni opholile, imizwelo eyakhayo, ukuze simbone wokugubha la masiko Slavic futhi bahloniphe yabo okhokho.
Sibhedlela "Golden Spike" Sochi: kanjani ukuba uthole, kobufakazi
Nizhny Novgorod esifundeni, echibini Svetloyar. Izibuyekezo mayelana ukuphumula, umlando, tinganekwane izithombe
Uyini software yomthombo ovulelekile embonini yezokuvakasha?
Indlela ndizela Spain kusuka eMoscow? Kanjani ukuze kube ukhululekile?
Yini ukuletha kusukela Czech Republic: Ikhambo Tips
Spring travel: lapho ukuya eholidini ngo-Ephreli
Tomy Board Games
Silicone ukwakha yezandla zabo. Silicone isikhunta
Dmitry Shishkin: Biography, izithombe kanye amaqiniso athakazelisayo
Lapho ukutshala anyanisi ebusika
Eningiliziwe odlulayo Styx: Umbusi Shadows
Ewusizo uma black currant ne ibele?
Le filimu "Kwake kwathi ngo Melika": nabalingisi yingxenye yale project ifilimu - ubukhulu izinkanyezi lokuqala Hollywood
Kanjani ukuba ngibheme nogwayi, ngokuvumelana nenhlonipho?
Turkey, ihhotela "Sunshine" - a Riviera kweqiniso Turkish!
Indlela ukuthatha isithombe esikrinini laptop ngezindlela ezahlukene?
Ukwakhiwa kwemithambo ye-uterine ne-myoma ye-uterine: ukwelashwa nemiphumela